Uma uya ku-ukushaywa eside, qiniseka ngiyothatha into yamagilebhisi, caloric futhi ewusizo ingxenye ozokusiza kalula akha lonke stock amandla akulahlekele. Wenze njalo abahambi ngaso sonke isikhathi, amasheya amagilebhisi omisiwe (omisiwe).
amaphesenti omisiwe ayisishiyagalombili liqukethe amanzi, futhi ngenxa yalokho, ngokuphelele, acima ukoma. Asele amabili - izakhi egcwele adingwa umzimba futhi ngizabalaza ngokuphelele indlala. Akukhona nje kuphela tonic engcono, kodwa futhi umkhiqizo emangalisayo nokwelapha wonke. Iqukethe uvithamini B, acid organic, cellulose kanye ushukela, enquma kilojoule yayo. Amagilebhisi unganakile kubonakala umkhiqizo lula kakhulu, kodwa lokho akulona iqiniso.
Awunazo amaprotheni namafutha, kodwa amaningi carbs (mayelana nesikhombisa amagremu). Isici esiyinhloko - amamaki. Ngokwesibonelo, amagilebhisi abamnyama, caloric okuyinto eliphakeme, mayelana ayisikhombisa - ayisishiyagalolunye kilojoule engamakhulu amagremu komkhiqizo, iqukethe inani elikhulu ushukela. Wayengumuntu emangalisayo eziwusizo kithi, kuyasiza ahlanze umzimba, ukususwa izinsalela kanye nezinye izinto eziyingozi. Kunciphisa lemali cholesterol kunomphumela ezuzisayo kobuchopho futhi inhliziyo. Uma udle kube izingxenyana ezincane nsuku zonke, njalo ingcindezi kuyinto evamile, kanti intsha izothatha iminyaka eminingi ezayo. Ano ngenxa wokuqukethwe lelisetulu ushukela, ke, njengabanye izinhlobo amagilebhisi is contraindicated sikashukela, ukukhuluphala ngokweqile isifo sokusha.
Ochwepheshe batusa ukudla la majikijolo e yizifo ezihlobene nokungabikho umsebenzi amathumbu esiswini, ikakhulukazi endabeni ukwehlisa uketshezi yayo. Kunconywa esifubeni somoya nezinye izifo umgudu. Namuhla, kunezindawo ezihlukahlukene eziningi ebanzi amamaki. Omisiwe - amagilebhisi ethandwa kakhulu sabantu. Calorie kuba kilojoule ayisishiyagalolunye nanhlanu. Kuyinto esihlwabusayo kakhulu futhi amnandi, futhi amajikijolo Awekho amathambo. Ngendlela omisiwe we efanayo okuqukethwe kwama-kilojoule inyuka cishe kathathu. Qaphela.
Labo are ukubukela izibalo zabo, uncamela ezimhlophe, futhi amagilebhisi kancane omuncu, okuqukethwe kabani ikhalori kuphela kilojoule amane nantathu. Ngalo, ukuchitha ukudla izinsuku, ngesikhathi lapho kungekho indlala ngabona imiphumela emihle kakhulu ye- kwesisindo. Futhi ukwenza lokho, zama ukukhetha izinhlobo esinamanzi kakhulu nesibalo esiphezulu fibre ewusizo. Abaningi, wazi ukuthi kilojoule amaningi amagilebhisi, cabangela-ke ziyingozi sibalo. Lena akuyona ngakho. amajikijolo zayo ziwusizo kakhulu kithi, futhi okuqukethwe izinto ezibalulekile kufanisa ubisi lukanina. Umuntu angakwazi kuphela ngcono uma kwenzeka ukuthi uyoba kuye isililo futhi inqwaba kakhulu, njengoba aziwa kahle, ngisho nemithi ziwusizo ikakhulu kudliwe ngaphandle kwemikhawulo, kuletha umonakalo kuphela.
I pink and red izinhlobo nazo hhayi eningi kilojoule. Amagilebhisi lezi shades zinhle kakhulu izitsha inhliziyo negazi, futhi ikhalori yayo kuphela ayisithupha nane kilojoule engamakhulu amagremu. Akukho okuningi amajikijolo ukuthi ungakha mncintiswano amagilebhisi. Kuvuselela umzimba, kwegazi ngcono, kususa amanzi angadingeki emzimbeni, futhi kuvusa esesuthi. Kube kunconywa ukuba ahlukane isidlo esikhulu. By the way, kuba kakhulu ewusizo izingane. Ochwepheshe ukweluleka siyifake ku imenyu yezingane isivele eminyakeni emibili ubudala. It has a lot of zinc nethusi, kanye nezinye izakhi, njengoba umzimba kudingekile ezikhulayo.
Ukuze zonke angasetshenziswa, kumelwe kushiwo mayelana ezinye Izimo. Amagilebhisi juice kwamagilebhisi kungabangela igesi kanye ukuvuvukala, futhi ngenxa yalokho akubona Kunconywa ngesikhathi sokukhulelwa. Kukhona-ke kufanele kube ngokuqapha ngesikhathi stomatitis kanye caries, izilonda, wamathumbu, isisu emphinjeni. Kuzo zonke ezinye izimo, iletha okuhle kuphela, kuhle imikhuhlane, has antitussive, expectorant kanye nemiphumela okulalisayo. Lo mkhiqizo esihlwabusayo kanye namanzi nje kusishiya impilo, nobungqabavu kanye namandla.
Mahhala Indlela to Lose Weight
Thanda amakati yasekhaya akwazi ukunqoba umhlaba wethu?
Umlando we-Cathedral ye-Annunciation (Kharkov). Insizakalo eKhishedral ye-Annunciation. Uhlelo